I-Java Sea: izici, ukuhlukahluka kwezinto eziphilayo kanye nezimfihlakalo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Namuhla sizokhuluma ngohlobo lolwandle olutholakala emngceleni osempumalanga ye-Indian Ocean. Imayelana ne- I-Java Sea. Ulwandle olugeza ogwini lweziqhingi nezindawo ezimbalwa ezise-Indonesia. Inendawo enkulu futhi iqukethe izimfihlakalo eziningi ezixake abantu iminyaka eminingi.
Kulesi sihloko sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana noLwandle lweJava nezici zalo.
2 Imisebenzi Yezomnotho YaseJava
3 Izimfihlakalo zoLwandle iJava
Ulwandle olusemkhawulweni osempumalanga ye-Indian Ocean. Igama alinikezwa ngenxa yesiqhingi saseJava esikhomba umkhawulo waso eningizimu. Inendawo engaba amakhilomitha-skwele angama-310.000, amakhilomitha ayi-1.600 ubude (empumalanga nentshonalanga) futhi cishe amakhilomitha angama-380 ububanzi (enyakatho-ningizimu). Njengoba itholakala kule ndawo, inemikhawulo yendawo okuyiyo IBorneo isenyakatho, iSumatra entshonalanga, iJava ngaseningizimu neSulawesi empumalanga.
Ngaphandle kweziqhingi esizibalulile, ibuye igeze yonke indawo engasogwini, enamakhulu eziqhingi ezincane nezingabalulekile kangako. Okubaluleke kakhulu eqenjini lamachibi ageza lolu lwandle kutholakala enyakatho-ntshonalanga ngokweqile futhi kuyiziqhingi ezibizwa ngeBangka neBelitung.
Ixhunywe enyakatho-ntshonalanga noLwandle i-East China ngeStrarait of Karimata nasenyakatho-mpumalanga neCelebes Sea ngeStrait of Makassar. Akusilo ulwandle olujule kakhulu, ngoba indawo ejulile cishe ingamamitha ayi-1.590. Leli phuzu elijulile uLwandle iBali. Ulwandle olutholakala maphakathi nezwe nolwandle oluncane oluxhasana phakathi kweziqhingi zaseBali naseKangean, yingakho igama lalo. Kunabanye ababhali abathi lolu lwandle lungolwandle lwaseFlores. Ubukhulu balokhu okuncane Inland yolwandle lwase-East Java Sea amakhilomitha-skwele angama-45.000
Imisebenzi Yezomnotho YaseJava
Kule ndawo yeplanethi kunemithombo ebalulekile kawoyela negesi yemvelo. Iningi lazo alikasetshenziswa, ngakho-ke alikabhekwa njengomsebenzi omkhulu wezomnotho kulezi zindawo. Ukudoba kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu kwezomnotho oLwandle lwaseJavane. Izinhlobo ezingaphezu kwezingu-3.000 XNUMX zihlala emanzini olwandle, okulenza licebe ngokuhlukahluka kwemvelo. Kodwa-ke, ukudoba kwenqatshelwe kwezinye izindawo futhi kuvikelwe ngumthetho ukonga izinhlobo zezitshalo nezilwane. Ezinye zalezi zindawo ezivikelwe yiKarimunjawa kanye neThe Thousand Islands National Parks.
Mayelana nokuhamba kwemikhumbi nokuthuthwa kolwandle, nakho kuyimisebenzi ebalulekile yezomnotho. Amanye amachweba abaluleke kakhulu e-Indonesia atholakala kuyo yonke le ndawo. Itheku elibaluleke kakhulu yileli elisenhlokodolobha yaseJakarta kodwa futhi nalawo kaSemarang, Surabaya no-Urjung Pandang, phakathi kwabanye.
Kumele futhi kuqashelwe, ezokuvakasha zomsebenzi wezomnotho. Futhi ukuthi zonke izindawo ezisogwini ezizungeze uLwandle iJava zinezindawo ezibalulekile zokuvakasha ezinelanga nelwandle elisezingeni. Njalo ngonyaka izinkulungwane zabahambi ziza kulezi zindawo ukuzojwayeza ukutshuza futhi zihlole nolwandle. Njengoba sishilo ngaphambili, lolu lwandle lunenani elikhulu lezinto eziphilayo futhi, ngakho-ke, kunemihume eminingi engaphansi kwamanzi, ama-coral reefs kanye nokuphahlazeka kwemikhumbi okuhehayo kubo bonke ochwepheshe be-diving. Ngokuqondile, isiqhingi saseBali yindawo ebaluleke kunazo zonke yezivakashi oLwandle lwaseJavanese nakuyo yonke i-Indonesia.
Izimfihlakalo zoLwandle iJava
Lolu lwandle lwabona izimpi ezinkulu zasolwandle phakathi neMpi Yezwe Yesibili. Lokhu kungqubuzana kwalimaza inhloso enkulu kwakuwukuthutha okwakuthatha amasosha aye eJava ukuze ahlasele umhlaba. Amasosha angama-2.200 900 afela empini, ama-250 awo kungamaDashi nezakhamuzi ezingama-75 zamakholoni izwe laseYurophu elalinawo e-Indonesia. Zonke lezi zidumbu sezihlale ngaphansi kolwandle iminyaka engaphezu kwengama-XNUMX. Lezi zidumbu zitholakala ku- izinsalela zemikhumbi yempi emikhulu emi-3 esebenze njengengcwaba elingaphansi kwamanzi. Wonke amasosha afunwa ngomkhankaso. Izinsalela zale mikhumbi zibonakala zanyamalala ngokuphelele. Akulula neze ngemikhumbi eyake yanesisindo esingamathani ayi-6.500 XNUMX, njengomunye wayo, ukunyamalala kanjena ngokushesha.
Imibono ngalezi zimfihlakalo ayihlangene nakancane nezinto ezingaphezu kwemvelo. AmaPirates nabathengisi bezinsalela yibo ababephethe ukuqaqa izingcezu zemikhumbi yempi emikhulu kwazise ziyigugu kubo bonke abafuna ukuthengisa kabusha izinto eziyigugu. Phakathi neminyaka, abathengisi bezinsalela bebelokhu bethola imvithi yemikhumbi futhi sebentshontshe zonke izingxenye zabo. Phakathi kwezinto ezigqame kakhulu kukhona insimbi, i-aluminium nethusi. Imikhumbi-ngwenya nemikhumbi engaphezu kwekhulu yacwila kulawa manzi phakathi nempi, okwenza yaba ngamathuna amakhulu kakhulu angaphansi kolwandle emhlabeni.
Baningi abazingeli bomcebo emanzini ase-Indonesia ngenxa yempi. Lokhu kuzingelwa kwe-scavenger tangent sekuyindlela enkulu yokuthola imali. Kungashiwo ukuthi kuyimboni yengcebo. Lokhu futhi bekuhehe izivakashi, njengoba abantu abaningi bengena emanzini ukulandela ngomkhondo izinsalela zalezi zikebhe. Iningi lalaba bantu bakwenza ngenhloso yokuzijabulisa. Lapho kufanele sengeze ubunzima bokuthi kunzima futhi kuyabiza ukugcina nokuvikela izikebhe eziningi kangaka ezilala ngaphansi kolwandle. Ikakhulukazi, kunzima ukonga lezo zikebhe ezikude nedolobha elikhulu, ngaphandle kokuthi banokusebenzisana kweziphathimandla zendawo.
Njengoba ukwazi ukubona, lolu lwandle luphethe ezinye izimfihlakalo nezimfihlo ezenza ukuhamba lapho kuhehe izivakashi. Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngoLwandle iJava kanye nezici zalo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » I-Java Sea